တောင်လေးလုံးဆရာတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
တောင်လေးလုံးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာကေတ (သိရိပဝ ရဓမ္မာဓရိယ) သည် အမရပူရမြို့ တောင်သမန်အင်း တောင်လေးလုံး ကျောင်းတိုက်၏ ပဓာန နာယက ဆရာတော် ဖြစ်သည်။
ဆရာတော်ကို အဘ ဦးသိန်းဖေ၊ အမိ ဒေါ်အေးရွေတို့က အမရပူရမြို့ တောင်ကြီးရပ်ကွက် အရှေ့ဆင်တိုင်ရပ်တွင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၄ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း (၁၀)ရက် (ခရစ်နှစ် ၁၉၃၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်) တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ခြောက်နှစ်သားအရွယ်တွင် တောင်သမန်အင်းစောင်း တောင်လေးလုံးကျောင်းသို့ ရောက်ရှိ၍ စာပေပညာသင်ယူခဲ့သည်။ ကိုးနှစ်သားအရွယ်တွင် ရှင်သာမဏေ ပြုခဲ့သည်။ (၁၆) နှစ်သားအရွယ်တွင် အမရပူရမြို့၊ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ) ထံတွင် စာပေပရိယတ်များ သင်ကြား၍ ဓမ္မာစရိယ အောင်မြင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ်ခန့်တွင် စုံထောက်ဝတ္တူမဂ္ဂဇင်း၌ ဆောင်းပါးတပုဒ်၊ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် ရေးသား၍ စာပေလောကသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၉၉) တွင် တောင်သမန်၏နံနက်ခင်း ကဗျာပါရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်း၌ ဆောင်းပါးများ ဆက်လက်ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ကိုပညာ (အမရပူရ) ကလောင်အမည် ခံယူ၍ ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ဦးဝင်းတင်၏ မန္တလေးမြို့ ဟံသာဝတီသတင်းစာနှင့် အခြားမဂ္ဂဇင်းများတွင်ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၅၈-၆၇ ခုနှစ်များတွင် ဗိုလ်မှူးဘသောင်း (မောင်သုတ) ၊ မန္တလေးမြို့ အနောက် ခင်မကန်ကျောက်ဆောက်ကျောင်းဆရာတော် အရှင်ဝါယမ၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်က ဆရာ ဦးမောင်မောင်တင် (မဟာဝိဇ္ဇာ)၊ သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်း စသည်တို့နှင့်အတူ တိမ်မြုပ်ရှားပါးနေသော မြန်မာစာပေနှင့် သမိုင်းစာပေများကို ဖော်ထုတ် လေ့လာခဲ့သည်။ စာတမ်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မန္တလေးတိုင်း၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ တောင်သမန်အင်းစောင်းရှိ ဆရာတော် သီတင်းသုံးနေထိုင်ရာကျာင်းကို အစွဲပြုကာ တောင်လေးလုံးဆရာတော်ဟု ထင်ရှားသည်။ ၁၉၈၅ နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ အသက် (၇ဝ) ပြည့် မွေးနေ့က စကာ အမရပူရ တောင်လေးလုံး ကျောင်း၌ မွေးနေ့ပွဲ နှစ်စဉ် ကျင်းပသည်။တောင်လေးလုံး မွေးနေ့ပွဲများသည် ဆရာမကြီး၏ ခိုင်မာသော စာပေဩဝါဒများကို အစဉ်အဆက် ခံယူခဲ့သည့် မွေးနေ့အ ခမ်းအနားများအဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။  နဝတ/နအဖ စစ်အစိုးရခေတ်တလျှောက် တင်းကြပ်ထားသည့် ကြားမှ လူထုဒေါ်အမာမွေးနေ့များ၊ စာပေအခမ်းအနားများ လက်ခံကျင်းပခွင့်ပေးသဖြင့် စာရေးဆရာများ ဒီမိုကရေစီမြတ်နိုးသူများ စုစုစည်းစည်း ဆုံတွေ့နိုင်ခဲ့ကြသည်။
ဆရာတော်၏ ကျောင်းကို ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ များက စောင့်ကြည့်ခဲ့သော်လည်း ဆရာတော်ကကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်ခဲ့သည့်အတွက် စာပေလောက သားများ၏ လေးစားကြည်ညိုမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; invalid names, e.g. too many ဦးဝင်းတင်သည် ၂၀၁၀ မန္တလေးသို့ ခရီးထွက်ရာတွင် ဆရာတော်ထံသို့ ဝင်ရောက်ဖူးမြော်ခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည် ကျောင်းဝင်းထဲတွင် အမှတ်တရသစ်ပင်များ အမှတ်တရ ကျောက်တုံးများ စိုက်ထူခဲ့သည်။ ဆရာဦးဝင်းတင် ဆရာတင်မိုး၊ ဆရာမြသန်းတင့်၊ ဆရာမကြီး ခင်နှင်းယု၊ ဆရာငွေဥဒေါင်း၊ ဆရာကြီးမဟာဆွေ၊ ဆရာဒဂုံတာရာ စသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အမှတ်တရကျောက်တုံးတွေ စိုက်ထူခြင်းဖြင့် အများအကျိုးကို ဦးစားပေးလုပ်သော ပြည်သူလူထုဘက်က ရပ်သော့ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာများကို အလေးအမြတ်ပြု အမှတ်တရပြုခဲ့သည်။ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; refs with no name must have content
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ ကဆုန်လပြည့်နေ့ စနေနေ့မနက်ပိုင်း ကောဇာသက္ကရာဇ် ၂၀၁၆ မေလ ၂၁ ရက်မနက် ၁၀နာရီခန့်တွင် တောင်လေးလုံးကျောင်းတိုက်၌ပင် ပျံလွန်တော်မူသည်။ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; refs with no name must have content
ဈာပနအခမ်းအနား ကို ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ သူဌေးဘုရား ရင်ပြင်တွင် မေ ၂၄ မနက် ၉ နာရီကကျင်းပခဲ့သည်။ ကျွင်းကျန်ရစ်သော ရုပ်ကလာပ်ကို နေ့လယ် ၁၂ နာရီတွင် ကျောင်းနှင့် ကပ်လျက်ရှိ လင်းဇင်းကုန်းသုဿန်၌ မီးပူဇော်သင်္ဂြိုဟ်သည်။
ဈာပနတွင် သံဃာ ၈၅ ပါးက သရဏဂုံတင်ကြပြီး အခမ်းအနားကို မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အချို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ စာပေအနုပညာနယ်ပယ်က ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်သည်။ ပျံလွန်ချိန်တွင် သက်တော် (၈၄)၊ ဝါတော် (၆၄) ရှိပြီဖြစ်သည်။
↑ "ပျံလွန်တော်မူသည့် တောင်လေးလုံး ဆရာတော်အား လင်းဇင်းကုန်းသုဿ န်တွင် မီးသင်္ဂြိုဟ်"။ မေ ၂၅ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ဆရာတော် ကိုပညာ (အမရပူရ) ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူ. မိုးမခ (ရန်ကုန်). မေ ၂၁ ၂၀၁၆. Retrieved မေ ၂၅ ၂၀၁၆. Check date values in: |date=, |accessdate= (help)
↑ ဒေါ်အမာ (လူထု ဒေါ်အမာ) (၁၉၁၅ - ၂ဝဝ၈)။ မေ ၂၅ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "အမေ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ မွေးနေ့"၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ၂၀၁၀။ မေ ၂၅ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ "တောင်လေးလုံးဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူပြီ". Newsgroup: RFA. မေ ၂၁ ၂၀၁၆. Retrieved မေ ၂၅ ၂၀၁၆. Check date values in: |date=, |accessdate= (help) ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "" defined multiple times with different content
↑ "ဦးဝင်းတင် မန္တလေးသို့ ခရီးထွက်"၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ၂၀၁၀။ မေ ၂၅ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဤ မြန်မာလူမျိုး အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောင်လေးလုံးဆရာတော်&oldid=447853" မှ ရယူရန်